Sorghum အဖျော်ယမကာ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Sorghum အဖျော်ယမကာ - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Sorghum အဖျော်ယမကာ ထုတ်ကုန်များ)
အသံအတိုးအကျယ် 52 တို့ကတရုတ် Baijiu လက်ကားအရက်လက်ဆောင်များ
တစ်ရငျခှငျအဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူသောက်သုံးတဲ့အခါမှာတထောခွက်နေဆဲလည်းနည်းနည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ရေ 52 အကြောင်းအရာ, Baijiu အရက်အရောင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသောဘောဇဉ်, mellow နှင့်အပြည့်အဝ, အဆုံးမဲ့ aftertaste နှင့်အတူမမြင်ရတဲ့, ကောင်းသော Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 52 ဖြစ်ပါတယ်။ Baijiu အရက်အကြောင်းအရာ 52 ရှင်းရှင်းလင်းလင်း,...
စီးပွားရေး 36,5 သည်တရုတ်ဝီစကီအရက်လက်ဆောင်များ
ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုထိပ်ကိုကျော်မသွားဘူး။ စပျစ်ရည်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့, ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း, အနည်မပါ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းဖြစ်၏ မြေအောက်ခန်း၏အိုမင်းနေတဆင့်စပျစ်ရည်ကိုပွင့်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ပန်းပွင့်တစ်လူအစုအဝေးများကဲ့သို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုပွင့်၏အမွှေးအကြိုင်။ တစ်ငုံအရင်သောက် ယူ....
အပြင်းထန်ဆုံးမွှေးကြိုင်တရုတ်အဖျော်ယမကာ: လူမှုရေး interconnectivity ကိုအလေးပေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင် baijiu ချည်နှောင်သောဘီယာအရက်ချက်သည်။ ရောင်ပြန်အထီးထီးနေခြင်းအတွက်ကိုလောင်စေခြင်းငှါအရာစပျစ်ရည်ကိုတစ်ဖန်, မတူဘဲ, ဒီဝိညာဉျကိုကြီးမားတဲ့စုဝေးဖြစ်ပြီးများသောအားဖြင့် multi-သင်တန်းမုန့်ညက်နှင့်အတူတွဲ။ round, raucous...
ညစာစားပွဲပါတီသည်မွှေးကြိုင်တရုတ်အဖျော်ယမကာ: မြေအောက်ခန်း၏အိုမင်းနေတဆင့်စပျစ်ရည်ကိုပွင့်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ပန်းပွင့်တစ်လူအစုအဝေးများကဲ့သို့ယဇ်ပလ္လင်ကိုပွင့်၏အမွှေးအကြိုင်။ တစ်ငုံအရင်သောက် ယူ. ညင်ညင်သာသာသင်၏လျှာ၏အစွန်အဖျားထိနဲ့။ ငွေရတတ်သောသူ mellow အမွှေးအကြိုင်, တိုးတက်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။...
အပြင်းထန်ဆုံးအရက်တရုတ်အဖျော်ယမကာ: ဤဆုတံဆိပ်၏အနှစ်အမွေ, ဒါမှမဟုတ်တောက်ပ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲကောင်းများ, တစ်ဦးပုံပြင်, စပျစ်ရည်တပန်းကန်။ တစ်ဦးကပုံပြင်မရေမတွက်နိုင်သောစပျစ်ရည်ကိုဘွားမြင်လေ၏။ Kaoshang အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘဝတွေကိုသာအတွေ့အကြုံရှိလူများကနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ ငါစပျစ်ရည်ကိုရှိသည်,...
ကောင်းသော technique ကိုကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုမှန်ကန်စေသည်။ သဘာဝကပစ္စည်းများ ယူ. , mellow အမွှေးအကြိုင်, အရည်အသွေးမြင့်စပါး, လက်ရာလက်ဘီယာအရက်ချက်နှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုမသောက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရေငတ်ခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းခံစားရဆဲလန်းဆန်းနေဖို့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။...
အမြင့်အရက်အကြောင်းအရာမွှေးကြိုင်တရုတ်အဖျော်ယမကာ: စပျစ်ရည်, ပျော့ပျောင်းသောအေးမြသန့်ရှင်းတဲ့, ချိုမြိန်, အနိမ့်ပေမယ့်အနည်းငယ်မဟုတ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ကို 100 နှစ်အရွယ်အိမ်အောက်ခန်းကစော်ဖောက်ခြင်းပြီးနောက်, ရေရှည်သိုလှောင်မှုများအတွက်အိုးအိုးတလုံးထဲသို့အရည်အသွေးမြင့်စပျစ်ရည်ကိုထည့်သွင်း, ဒဏ်ငွေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အကောင်းအရသာ,...
Kao Shang အမြင့်အရက်အပြင်းစားအနံ့တရုတ်အဖျော်ယမကာ
သူရဲကောင်းများ, တစ်ဦးပုံပြင်, စပျစ်ရည်တပန်းကန်။ တစ်ဦးကပုံပြင်မရေမတွက်နိုင်သောစပျစ်ရည်ကိုဘွားမြင်လေ၏။ Kaoshang အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဘဝတွေကိုသာအတွေ့အကြုံရှိ people.High အရည်အသွေးဆန်စပါး, လက်ရာလက်ဘီယာအရက်ချက်ခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါ, ထိုသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ ငါစပျစ်ရည်ကိုရှိသည်,...
ကျနော်တို့ 36,5%, 42%, 52% အရက်အကြောင်းအရာတရုတ်အရက်များရှိသည်။ အဟောင်းစပျစ်ရည်ကိုမွှေးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုအချိန်အမွှေးအကြိုင်ကျော်, ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့, အချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုရပ်ပေးနိုင်သည်။ တိုင်းခွက်ကိုလုံ့လဝီရိယနှင့်ပညာ၏ crystal ဖြစ်၏ တိုင်းခွက်ကို mellow နဲ့ရိုးရိုးအရသာနှင့်ပြည့်ဝ၏။ စပျစ်ရည်,...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်သင်၏ခံစားချက်များကိုဖော်ပြဖို့ရွေးချယ်ချင်သောဆုကြေးဇူးဘယ်လို, ဆုကြေးဇူးကို၏အရည်အသွေးအရမ်းနိမ့်မဖြစ်သင့်, ဒါပေမယ့်လူတွေကအမြဲတမ်းဆုကြေးဇူးကို၏စျေးနှုန်းများအတွက်ဘတ်ဂျက်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့တစ်တွေ cost- တွေ့ရှိရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည် ထိရောက်သောထုတ်ကုန်။...
ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုထိပ်ကိုကျော်မသွားဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့အနိမ့်အရက်တရုတ်အဖျော်ယမကာကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့, ဆိုင်းငံ့ထားခြင်း, အနည်မပါ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပွင့်လင်းဖြစ်၏...
ကျနော်တို့ပါတီတွေ, ပွဲတော်များ, စားသောက်ဆိုင်, လက်ဆောင်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အထုံးစံအရက်များရှိသည်။ အဟောင်းစပျစ်ရည်ကိုမွှေးဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောစပျစ်ရည်ကိုအချိန်အမွှေးအကြိုင်ကျော်, ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့, အချိန်ရဲ့စမ်းသပ်မှုရပ်ပေးနိုင်သည်။ တိုင်းခွက်ကိုလုံ့လဝီရိယနှင့်ပညာ၏ crystal ဖြစ်၏ တိုင်းခွက်ကို mellow...
Sorghum အဖျော်ယမကာ Kaoliang အဖျော်ယမကာ တရုတ် Sorghum အဖျော်ယမကာ 60 အရက်အဖျော်ယမကာ custom တရုတ်အဖျော်ယမကာ